Phambi Unyango - Shijiazhuang YiLing Hospital
Pre-ukufika amalungiselelo - Phambi kokuba ukufika, siza kuxoxa nawe ngayo izinto kunye iingxelo zonyango zabanye kuya kufuneka ukuba uze kunye pre-ukufika amalungiselelo zemali kuyimfuneko. Siya kukuvuyela ukukunceda naziphi na ezinye iinkxalabo nako mayelana ngesithuthi, ukutya, imozulu, okanye naziphi na ezinye iimfuno ezizodwa.
Uncedo kwisikhululo seenqwelo-moya - Abasebenzi benkonzo uza kudibana moya xa ufika e China kunye ndinizise kwiziko lethu. Ekufikeni kwakho, siza kukunceda uzalise inkqubo yokwamkelwa kwabafundi, gcwalisa iifom zobhaliso, kwaye akuncede utshintshe indawo entsha.
IiNkonzo zeeLwimi - Siyazi ukuba ukuhamba China ingaba nzima ngaphandle nokukwazi ukuthetha Chinese. Nangona kunjalo, abasebenzi bethu benkonzo isigulane ukunika uncedo kolwimi IsiNgesi.
Visa Extension - Maxa wambi, umjikelo unyango isigulana kuya kuthatha ixesha elide ngaphezu kwexesha elinikiweyo kwi visa yesigulane. Kule meko, abasebenzi bethu benkonzo nomonde kunokukunceda wandise ukuhlala kwakho. Ngokuqhelekileyo, ixesha izigulana 'unyango lokuqala kufuna malunga 30days, kodwa kubalulekile ukuba kungabikho bungqingqwa eziyimfuneko ukuze uhlale ixesha elide ukuba unyango rhoqo.